Kooxaha ku baaqaya in California ay go’do oo bilaabaay ururinta saxeexyada si loo qaban qabiyo afti – Xeernews24
Saraakiisha California ayaa ku dhawaaqday Jimcihii in ay ansixiyeen olole ku baaqaya in madax-bannaani uu gaadho gobolkani,kuwaas oo bilaabaay ururinta saxeexyada loo baahan yahay si loo qaban qabiyo afti, taas oo codbixiyayaasho ay ku go’aansan doonaan hadii ay doonayaan inay sii joogaan dalka Mareykanka ah ama ay ka go’ayaan.
Wakaalada wararka AP ee Maraykanka ah ayaa sheegtay in xoghayaha gobolka Alex Padilla ay ka gudoontay Khamiistii kooxdan talo soo jeedin,ururkan oo isku magacaabay (Ololaha Haa madaxbanaanida California) kaas oo ugu baaqaya codbixiyaasha si ay ugu codeeyaan in la laalo qayb ka mid ah distuurka gobolka ee tilmaamaya in California ay kamid tahay dalka Mareykanka.
Padilla ayaa sheegay in uu siinayo oggollaansho ansixinta si loo bilaabayo ururinta ku dhawaad 600 oo kun oo saxeexyo ah oo lagama maarmaan ah si loo soo bandhigo aragtida ka go’itaanka ee codbixinta guud.
Isku dayo hore oo lagu damacsanaa California ay noqoto dal madax-bannaan ama loo qaybiyo gobolo ayaa lagu guuldareysatay in la sameeyo.
Si kastaba ha ahaatee,doorashada Donald Trump ee madaxweynaha Maraykanka loo doortay bishii November ayaa waxay soo nooleeyay mar kale isku dayga ah in California ay ka go’do Maraykanka intiisa kala.
Qorshaha ururkan ma uunan xusin Trump oo dhadhamiyey guuldaradii ba’nayd ee ay gaadhsiisay hogaamiyihii Dimuqraadka Hillary Clinton ee kala kulmay gobolka California doorashadii madaxweynaha, halkaas oo ay si weyn ugagag horeeysay in ka badan 4 malyuun oo codad ah.
Hindisahan ayaa waxa uu ku baaqayaa wax ka badilka distuurka oo cinwaan looga dhigay “California waa dal” kaasoo codbixiyayaasha ay codeeyaan in la meesha laga saaro qodobka muujinaya in distuurka Mareykanka uu yahay sharciga ugu sarreeya dalka.
Ololahan ayaa la qorsheeyay in lagu ururiyo marka la gaadhu 25 bisha July ee sannadkan tiro dhan 585 kun iyo 407 oo saxeexyo ah, ama u dhiganta marka la isku geeyo 8% tirada cod-bixiyayaasha diiwaan-gashan ee liiska ku jira gobolkan aadka u balaadhan ee hodan ka ah ee ku yaala gableedka Maraykanka,kaas oo oo tirada dadka ku nool ay yihiin 40 malyuun oo qof.
Hadii gobolka California uu noqon lahaa dawlad madaxbanaan waxa uu ka gali lahaa awooda dhaqaalaha ee dunida kaalinta 6aad.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/01/california.jpg 400 700 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-01-30 09:53:072017-01-30 09:53:07Kooxaha ku baaqaya in California ay go’do oo bilaabaay ururinta saxeexyada si loo qaban qabiyo afti
Masaajidii North Amerika oo guban maalma yar ka dib Hadalkii Trump Soomaalida Maraykanka oo Dibad Baxyo Bilaabay ay ku diidan yihiin Kaligii taliyaha...